मलाई खुशी पार्न सके बेडसिन पनि दिन्छु: चन्दा दाहाल – Bardiwas Times
Bardiwas Times Nepali News & Entertainment
खुलमखुल्ला सभा गरेरै देश टुक्रिएको घोषणा गर्ने तयारीमा सिके राउत !
यस्तो अवस्थामा गर्दै नगर्नुस लसुनको सेवन, नत्र ज्यान पनि जानसक्छ (भिडियोसहित)
हजुर को एक सेयर ले करोडौं को मालिक बन्न सक्नुहुन्छ ,भाग्य छ भने यो पोष्ट शेयर गरेबापत ४.५ मिलियन डलर पाउने,के यो सहि हो त?
मलेसिया माँ bear खादाँ १४ जना को एकै साथ मृत्यु जस माँ नेपाली पनी परे शेर गरी सबै सामुँ पूर्याउ (भिंडियों सहित)
केपि ओलिले दिए नेपाल भारत सिमानामा यस्तो काम सुरु गर्न निर्देशन…सबै नेपालिले शेयर गरौ
भद्रगोलमा यस्तो देखियो पाँडे र काउली बुढीको रोमान्स (भिडियो)
बोर्ड परीक्षा टप गरेकी १९ वर्षकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार
अमेरिका र फिलिपिन्समा आँधीको कहर, ठूलो जनधनको क्षति ३९ को मृत्यु
३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका एसएसपी लोहनीलाई थुना मुक्त गर्न आदेश
Home / Entertainment / मलाई खुशी पार्न सके बेडसिन पनि दिन्छु: चन्दा दाहाल
मलाई खुशी पार्न सके बेडसिन पनि दिन्छु: चन्दा दाहाल
Bardiwas Times June 19, 2018	Entertainment, Video Leaveacomment 627 Views
Home कला र शैली मलाई खुशी पार्न सके बेडसिन पनि दिन्छु: चन्दा दाहाल
उडि जाने हावा’ गीतबाट गायन क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी सोलुखुम्बुकी सरस्वती लामा हट कलाकारको लिस्टमा पर्ने गर्छिन् । उनी गीत लेख्ने देखि लिएर सङ्गीत दिने, भिडियोमा निर्देशन तथा मोडलिङ पनि गर्छिन् । तर उनीसँग भएको कलाकारिताले भन्दा उनको नग्न भल्गर प्रदर्शनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा उनलाई चिनाएको छ । कला र क्षमताले कलाकार बनेका नेपाली कलाकारहरू सीमित छन् ।
त्यसैगरी डान्सर रिया श्रेष्ठ पनि निकै विवादित छिन्। बाँकेकी रिया श्रेष्ठ विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौंमा छिन् । कलेजको अध्ययनको क्रममा काठमाडौँ आएकी उनी मोडलिङ र चलचित्र क्षेत्र दुवै विधामा यतिबेला सक्रिय छिन् ।
मलेसियाको जोहर राज्य अन्तर्गत मुआरमा सांस्कृतिक धमाका ४ को निम्ति त्यहाँ पुगेकी कलाकार रिया श्रेष्ठले स्टेजमा नाच्दा नाच्दै आफ्नो शरीरको वस्त्रहरू खोलिन्।
सुलेमान शंकर(ईकु) संग स्टेजमा उत्रिएकी रियाले पहिले आफ्नो शरीरको माथिल्लो वस्त्र खोलेर दर्शक तिर फ्याँकेकी थिइन्। उक्त घटनापछि उनी निकै विवादमा तानिइन्।
मोडल चन्दा दाहाल म्युजिक भिडियोमा निकै बोल्ड रूपको कारण विवादित छिन्।
Previous Postधरानमा भर्खरै प्रहरीले अर्को गुन्डालाई गोली हान्योNext Postडा. देवकोटाको काजक्रिया तीन छोरीले गर्ने
About Bardiwas Times
Previous Home जानकारी बियर पिउनुस, क्यान्सर,सुगर र हृदयघातबाट बच्नुस – यी हुन् वियर पिउनाले स्वास्थ्यलाई हुने १२ फाइदा ! जानकारीस्वास्थ्यबियर पिउनुस, क्यान्सर,सुगर र हृदयघातबाट बच्नुस – यी हुन् वियर पिउनाले स्वास्थ्यलाई हुने १२ फाइदा !
Next ज्योति बिकाश बैंक मा जागिर खुल्यो
नेपाल सरकार सबैभन्दा ठुलो ठग हो भन्दै भाडाका ट्याक्सी चालकले पोखे यस्तो आक्रोश(हेर्नुहोस् भिडियो)
यी पाच राशीलाई १० बर्ष सम्म मालामाल, यसरी शनिदेवका यस्ता कृपा मिल्दै, धनसम्पती देखी बौद्धिक क्षेत्रसम्म पूरा पढ्नु होस ।।
के तपाइकाे नङ टाेक्ने बानी छ ? तुरून्त हटाउनुस : ज्यानै पनि जान सक्छ !
यस्ता छन् मोटोपन घटाउने र किड्नीको सफाई गर्ने चामत्कारीक उपाय
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनावश्यकरुपमा मोटाउनु राम्रो लाग्दैन। त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो। …
यदुन्नदन मिश्रा on जनताले कर नतिरे कसले तिर्छ ? करको विरोध गर्नु हुँदैन’: नेकपा नेता गजुरेल
आम जनता on डाक्टर केसीको नाम जपेर गणतन्त्र मुर्दावादको नारा घन्काउँदा लज्जाबोध भएन गगन-रबिन्द्र सर ?